China JHPRO JH-150 2 Chisel Bits Electric Demolition Jack Hammer Isixhobo mveliso kunye nabenzi | Jiahao
I-JHPRO JH-150 ene-2 ​​Chisel Bits Ukudiliza uMbane Isixhobo seJack Hammer
Isando sokudiliza iJHPRO sisetyenziselwa ukubeka umbhobho, ukufakela oomatshini, unikezelo lwamanzi kunye neendawo zokuhambisa amanzi, ukuhonjiswa ngaphakathi, amazibuko kunye nolunye ulwakhiwo lobunjineli. Sigxile ekuveliseni izixhobo ezikumgangatho ophezulu ezinokuthenjwa ukuhambisa ukusebenza okuphezulu. Ke ukuba ujonga isando sokudiliza esinexabiso elinamandla okwenza imisebenzi yoxinzelelo njengokufaka iingcango ezityibilikayo zokuhlaziya indlu yakho yangasese, iJH150 lukhetho olufanelekileyo.
Esi sixhobo seengcali sokudiliza isando sokugqobhoza kunye nomsebenzi wokudiliza, ukungcangcazela okuphantsi ekusebenzeni kwaye akukho mthwalo. Ubungcali bokwenza umsebenzi, umatshini omtsha wobuchwephesha kumgangatho ophezulu, NgeeJoules ezingama-45 zamandla empembelelo kunye neqondo lempembelelo ye-1900bpm, uya kuba nakho ukubetha ngomsebenzi osindayo wekhonkrithi kunye neebhloko zokwakha ngaphandle kokophula ukubila.
Isibambiso esingasemva sokubamba kunye notshintsho lokutshixa kunciphisa ukudinwa, ukuze ugcine ukutyumza ikhonkrithi de kube lixesha lokuhla kwezixhobo. Isixhobo-esingatshintshi ngokukhawuleza ukutshintsha i-chuck yenza ukutshintsha i-chisel bits ngokulula kwaye kukho iibits ezimbini ezibandakanyiweyo ukuze uqalise.
I-JH150 yinyithi yentsimbi yokuchithwa kwealuminium. Ifakwe kwi-45 * 94 mm imoto yocingo lobhedu, amandla okwenene e-1700W, Iyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zomsebenzi onzima ophukileyo. Imoto egqunyiweyo kabini iphucula ukhuseleko. I-JHPRO ibanga lobungcali lesando sombane liphupha lomqhubi njengoko likhawuleza ngamandla aphezulu, likhululekile ukubamba. Isando siza kunye nomgangatho olungileyo we-chisel kunye nentsimbi.
Le yeyethu i-1700 watt yokutshatyalaliswa kombane i-hammer breaker efanelekileyo yokuchithwa, ukujijiswa, ukugqobhoza, ukuqhekeza imingxunya kwikhonkrithi, ibhloko, izitena, i-stucco yethayile, ukususwa kwesiseko sezindlu, isileyiti sekhonkrithi, itshimini yeoyile nokunye okuninzi! Ukulungiswa kwangaphambili kwe-360 ° kubonelela ngolawulo olongezelelweyo kunye nentuthuzelo ngexesha lokusetyenziswa okwandisiweyo. Unganqikazi ukuza nomnye ekhaya. Ibonakaliswa ngokwakhiwa komsebenzi onzima kunye nenqanaba lezemveliso ukuzinza okuphezulu. Inempawu zeeshelsi ezimbini zokuphindaphinda imisebenzi. Isibambo esijikelezayo esingu-360, isibambo esingatyibiliki sokubambelela okuzinzileyo. Izibambo ezixhonyiweyo zikwasetyenziselwa ukufunxa ukungcangcazela ukunciphisa ukudinwa kokusebenza.
Ukutyhoboza ikhonkrithi, ukusika, ukumba kunye nokuphamba.
1. Emva kokubeka incam yesixhobo kumngxunya wesiseko, swith ON. Kwezinye iimeko, kuye kufuneke ukubethelela phezulu isuntswana ngokuchasene nendawo yokutyunyuzwa ngenkani ukuze uqalise ukubetha okuhlabayo. Oku akubangelwa kukungasebenzi kakuhle kwesixhobo. Kuthetha ukuba indlela yokhuselo ekhuselekileyo ngokuchasene nomthwalo ongayibethi isebenza.
2. Ngokusebenzisa ubunzima bomatshini kwaye ngokubamba isando ngezandla zozibini, umntu unokulawula ngokufanelekileyo intshukumo elandelayo yokubuyisa inyanga. Ukuqhubeka kwinqanaba lokulinganisa lomsebenzi, ukusetyenziswa kwamandla amaninzi kuya kuphazamisa ukusebenza kakuhle.
Isilumkiso: Ngamanye amaxesha isixhobo asiqali ukubetha nokuba imoto ijikeleza kuba ioyile iye yatyeba. Ukuba isixhobo sisetyenziswa kumaqondo obushushu asezantsi okanye ukuba sisetyenziswa emva kwexesha elide singasebenzi, isixhobo kufuneka sisetyenziselwe ukusebenza kwimizuzu emi-5 ukuze usifudumeze.
1. Ukukhangela isixhobo
Ukusukela ukusetyenziswa kwesixhobo esi-buthuntu kuya kubangela ukungasebenzi kakuhle kwemoto kunye nokuthotywa ngokufanelekileyo, xa ithatha indawo yento entsha okanye ngaphandle kokulibazisa xa kuqatshelwe ukubola.
2. Ukuhlola izikrufu ezinyukayo
Rhoqo jonga zonke izikhonkwane ezinyukayo kwaye uqinisekise ukuba ziqinisiwe ngokufanelekileyo. Ukuba kukho naziphi na izikhonkwane ezikhululekileyo, ziphinde zikhawuleze. Ukusilela ukwenza oko kunokubangela ingozi enkulu.
3. Ukugcinwa kweemoto
Icandelo leemoto elibhijeleyo yeyona ntliziyo yesixhobo samandla. Zilolonge ukuze uqiniseke ukuba iiwindow azonakalisi kwaye / okanye zimanzi ngeoyile okanye ngamanzi.
4. Ukuhlola iibrashi zekhabhoni
Imoto isebenzisa iibrashi zecarbon ezinamalungu anokusebenziseka. Xa zinxityiwe okanye zikufutshane nomda wokunxiba, oko kunokubangela ingxaki yeemoto. Xa i-auto-stop stop carton ibrashi, imoto iya kuyeka ngokuzenzekelayo. Ngelo xesha, buyisela zombini iibhrashi zekhabhoni ezintsha zineebhrashi ezifanayo zekhabhon, eziboniswe kumfanekiso.
Ukongeza, hlala ugcina iibhrashi zekhabhoni zicocekile kwaye uqinisekise ukuba zityibilika ngokukhululekileyo ngaphakathi kweziphatho zebrashi.
Amanyathelo okutshintsha: Ibhrashi yekhabhoni ingasuswa ngokususa isiciko sekepusi, irabha yekepusi kunye nekepusi yebhrashi kulolo hlobo ngaphakathi.
JH-150 Ukucaciswa Izixhobo
Umbane ulinganisiwe: 230V
Ikaliwe amandla ombane: 1700W
Ixabiso lempembelelo: 1900Bpm
Impembelelo yamandla: 60J
Umgcini wesixhobo: Hex.30mm
Imoto: 45 * 94mm
I-QTY / CTN: 1pc
Ibhokisi engaphakathi: Ibhokisi yentsimbi
Iphakheji yeCarton: 71 * 17 * 30 CM
I-NW / GW: 14.3 / 22KG I-Hex point chisel: 1pc 30 * 400mm
I-Hex chisel ethe tyaba: 1pc 30 * 400mm
Isibambo sokuncedisa: 1pc
Socket intloko utsalo: 3pc
1.Ngokusebenza kabini kwepiston, Ine-hammer ephezulu kunye nefuthe lamandla;
2.Kungukumkani wokuqhekeka, kwaye unokwaphula iingcali ngamatye.
Isebenzise iphedi yasentwasahlobo ukuqinisa umzimba;
I-4.Imoto yenziwe ngobhedu, ingaqhubeka nokusebenza ixesha elide.
5.Egonomic yokubamba ukuphucula intuthuzelo ukusebenza;
Umgcini wesixhobo se-6.HEX ngokukhusela uthuli oluhlanganisiweyo;
Uhlobo lwe-ergonomic yoyilo oluqinileyo, ukufikelela ngokulula kwindawo yokusebenza.
8.Powerful umsebenzi umonakalo
Izixhobo ezinokuthenjwa ze-9, ixesha elide
10.Extra ubukhulu obukhulu kunye namandla e-aluminium
11.Double zigqunyiwe uyilo istili, ukuhambisa ukusebenza ekhuselekileyo
I-12.360 degrees swivel side handle ukulawula okulula
13.Iqhosha lokuvula livumela ukusebenza ngokuqhubekayo ngaphandle kokubamba iqhosha
Egqithileyo I-JHPRO JH-100A izixhobo zamandla efektri Ukudilizwa kwesixokosi sombane sokuchithwa kwesando
Okulandelayo: Uyilo lweJiahao JH168 Ukudilizwa kombane kwiJack Hammer Breaker Breaker
Uyilo lweJiahao iJH168 yokuDiliza uMbane uJack H ...
JHPRO JH-100A izixhobo zombane mveliso chis Electric ...
I-JHPRO JH-95 Ukudilizwa kombane kwiJack Hammer Con ...
I-JHPRO JH-180 yokuDiliza umbane i-Hammer Heavy D ...
I-JHPRO JH-86 Ukudilizwa kombane kweJack Hammer Con ...
JHPRO JH-85 izixhobo zekhonkrithi zokudiliza izixhobo ...